Inona no atao hoe fantsom-bazaha mainty?
A rakotra tongolo mainty dia endrika iray tongolo gasy izay avy amin'ny fermentation sy ny fahanterana ny tongolo vaovao. Ny fikarakarana ny tongolo gasy vaovao mba hamokatra ny tongolo mainty dia atao amin'ny toe-piainana mafana ary misy hafanana avo manomboka amin'ny 40 ° C ka hatramin'ny 60°C mandritra ny folo andro eo ho eo.
Miaraka amin'ireny toe-javatra ireny, ny vanim-potoan'ny tongolo gasy dia haingana kokoa ary mihodina amin'ny fotsy hatramin'ny loko mainty / mainty. Fonosana vitaminina sy mineraly be dia be izy io toy ny manganese, Vitamin C, Vitamin B6, Selenium, Vitamin B1, phosphorous, varahina ary calcium.
Ny tongolo mainty misy masirasira dia vatan-tsakafo matsiro malaza amin'ny taonjato an-taonany any Thailand, Korea Atsimo, ary koa any Japon, saingy ireo firenena hafa toa an'i Taiwan, nanangana azy io tato ho ato, indrindra any amin'ny trano fisakafoanana sy fisakafoanana avo lenta. Ampiasaina ampiasaina matetika ny tsiro amin'ny sakafo isan-karazany, anisan'izany ny fifangaroana hena amin'ny tsindrin-tsakafo, ary heverina ho mpanam-bary tsara kokoa noho ny fananana antioxidant.
Ankoatra ny fanatsarana ny tsiron'ny sakafo, ny tombony azo avy amin'ny tongolo mainty dia misy ny fanohanana ny fihenan-tsakafo, ny fanatsarana ny fahasalamana amin'ny hoditra ary ny hery fanefitra mahery vaika. Azonao atao ny mividy tongolo mainty ferment amin'ny endrika mainty ahitra fangaro, tongolo mainty baomba mihinana na kapo mainty ahitra.
Ny mekanika mainty hoditra tongolo mainty
Ny fitrandrahana tongolo mainty dia misy fiantraikany manohitra ny fanaintainana izay ahatongavany amin'ny fihenan'ny Ny famokarana cytokine TSY misy sy pro-inflammatoire amin'ny sela RAW264.7 entanin'ny LPS. Ny fihanaky ny sela misy hexane an'ny tongolo lay ary ny fitenenana ICAM-1 ary VCAM-1 ao amin'ny sela stromal endometrial ao amin'ny vatana izay ateraky ny TNF-α.
Izy io koa dia manakana, leukotrienes, cytokine pro-inflammato ary koa ny asan'ny COX-2 sy 5-lipooxygenase ao anatin'ny sela RAW264.7 entanin'ny LPS. Vokatr'izany dia mihombo ny aretin'ny fivontosana iray na voasakana tsy hitranga.
Raha mikasika ny hetsika oxidative, ny tongolo mainty dia misy fangaron-doha sy flavonoid, izay samy manana anjara toerana lehibe amin'ny fampandehanana làlana Nrf2. Ny sôma isan-karazany natolotry ny tongolo lay dia mampitombo ny haavon'ny fitenenana mRNA ao amin'ny angovo anti-oksizenina toy ny HO-1, NQO1, ary GST. Ny angovo, izay misy ny tetrahydro-β-carboline derivatives, N- glutamate N-fructosyl arginine allixin sy selenium, tanterahina amin'ny alalan'ny fampahavitrihana Nrf2.
Famokarana vokatra maintso mainty
Araka ny efa voalaza teo aloha, ny katsaka mainty dia avosa avy amin'ny tongolo vaovao amin'ny fatrany ity farany ao anaty tontolo voafehy tsara. Tokony ho mando tsara ny tontolo iainana (miaraka amin'ny hamandoana eo amin'ny 80 ka hatramin'ny 90%) ary mahamay toy ny 40 °C mankany 60 °C. Mandritra ny fizotrany dia miorim-bidy maro samihafa noho ny fihetsik'i Maillard.
Miaraka amin'ny fotoana, ny felan'ny tongolo fotsy dia maizina amin'ny loko mainty. Mivoatra ihany koa izy ireo tangy, siramamy, tsiro balsamika, haingon-kofehy ary hanitra mampiavaka.
Ny faharetan'ny fizotran'ny fitsaboana dia miovaova amin'ny mpamokatra iray mankany amin'ny iray hafa saingy amin'ny ankapobeny dia maharitra efatra ka hatramin'ny efa-polo andro. Miankina amin'ny kolotsaina sy ny safidin'ny mpanamboatra ary koa ny tanjona kendrena amin'ny akora mainty.
Na izany aza, araka ny fikarohana natao tamin'ny fanadihadiana iray, 21 andro dia tsara rehefa atao ny fikarakarana ny tongolo lay amin'ny hamandoana eo amin'ny 90% sy ny hafanana 70 60 °C. Araka ny fanadihadiana, ny toe-javatra sy ny faharetan'ny fitsaboana dia mampitombo ny fahaizan'ny antioxidant ireo vokatra vokarina, ka noho izany dia mahazo tombony azo avy amin'ny tongolo mainty.
Tombontsoa ara-pahasalamana mainty ny tongolo mainty
Betsaka ireo Mahasoa ny fahasalamana mainty ny tongolo mainty, Ao anatin'izany ny:
1. Ny fitrandrahana tongolo mainty dia manampy amin'ny fihenan'ny lanjany
Ny valin'ny fikarohana voalavo iray dia nampiseho fa ny tongolo lay mainty dia afaka mampihena ny lanjan'ny vatana, ny haben'ny sela matavy sy tavy amin'ny vavony. Porofon'izany ny mety ho tongolo mainty levitra tombontsoa eo amin'ny olombelona.
Ny porofo dia tohanan'ny fandinihana vao haingana izay mampiseho fa ny fampidirana ny tongolo mainty dia mety hanatsara ny fahaizan'ny fandoroana kaloria ny vatanao. Manampy anao izany hampihena ny lanjany haingana kokoa ho an'ny fahasalamana sy ny fizika tsara kokoa.
Noho izany, raha maniry ianao na ho te hanina kely fotsiny, dia eritrereto ny fidio amin'ny paoma mainty lanja.
2. Mahasoa ny hoditra ny tongolo gasy
Ny tombo-tsoa tongolo mainty ho an'ny hoditra dia vokatry ny fisian'ny fitambarana S- allylcysteine ​​ao anaty tongolo lay. Ny fangaro dia mahatonga ny tongolo lay hametaka mora foana hanolorana ny hoditrao sy ny sisa amin'ny vatanao ho fiarovana tsara kokoa amin'ny aretina.
Ny iray amin'ireo tombony azo avy amin'ny tongolo mainty ho an'ny hoditra dia ny fisorohana mony ary famongorana. Ny mony dia fepetra amin'ny hoditra bakteria izay misy kilema ary sakamalaho tahaka ny sakamalaho amin'ny hoditrao. Ny pimples dia vokatry ny fanelingelenana sy fivontosana amin'ny folikelinao.
Noho ny fananany antibaktera, noho ny allicin, ny katsiro mainty dia mamono ny bakteria miteraka bakteria. Ho fanampin'izany, ny fiantraikany anti-inflammatory dia mampihena ny fihenan-tsasatra sy ny fihanaky ny mony.
3. Ny fitroka fotsy tongolo mainty dia manampy amin'ny fanatsarana kolesterola vatana
Ny fikarohana siantifika isan-karazany dia mampiseho fa ny tongolo mainty dia manampy amin'ny fanatsarana kolesterola amin'ny olona miady amin'ny tahan'ny kolesterola avo lenta. Mampitombo ny lipoproteins avo be (HDL) izy io, ny kolesterola tsara ao anaty olona iray. Ny fikarohana hafa dia manolo-kevitra fa manamaivana ny fihenan'ny kolesterola ratsy sy ny triglycerides avo.
4. Ny fitrandrahana tongolo Black dia manampy amin'ny fanatsarana ny tsindry amin'ny ra
Ny tongolo mainty dia rakotra miaraka amina organosulfur, ny tongolo mainty kosa manampy ny lalan-dra mba hiala voly. Ny fialan-tsasatra io dia mitarika amin'ny fihenan'ny rà satria toa betsaka ny toerana hikoriana tsara kokoa.
Ao amin'ny fandinihana natao momba ny marary 79 izay voan'ny fiakaran'ny tosidra, ny mpikaroka dia nanamarika ny fihenan'ny rà mihena 11.8 mm teo amin'ireo marary nitondra takelaka. Ireo marary ireo dia napetraka tao anatin'ny régime fitsaboana fitsaboana tongolo gasy 12 herinandro izay nitondrana takelaka mainty roa na efatra isan'andro mandritra ny vanim-potoana.
5. Famaivanana mamontsina
Nahazoana Mahasalama ny, tongolo gasy mainty afaka manome fanamaivanana lehibe. Izany dia noho ny zava-misy fa ny antioxidant dia mifehy ny famantarana ny sela, ka izany no mahatonga ny fampihenana ny fivontosana. Ankoatr'izay, ny antioxidant manalan-tena amin'ny radika maimaim-poana manimba ny vatanao dia miaro ny sela amin'ny vatanao amin'ny adin-tsaina mampidi-doza izay manimba azy ireo, ka mahatonga ny fivontosana.
6. Volo mahasalama
Ny tombotsoan'ny tongolo mainty ho an'ny volo dia efa fantatry ny olona hatrizay fe-potoana taloha. Ankehitriny, menaka tongolo mainty dia hita ao amin'ny fivarotana kosmetika maro mba hanomezana olona maniry ny hitazona ny volo salama miaraka amin'ny tombony tongolo mainty ho an'ny volo. Manohana ny fitomboan'ny volo vaovao ny menaka, mampiato ny volon-doha ary mampihena ny fihenan'ny volo rehefa ampiharina tsy tapaka.
Mahasoa ny tongolo mainty ny vokarin'ny volo avy amin'ny zava-bita amin'ny tongolo gasy anti-microbial fananana, noho izany ny fahafahana hiady amin'ny bakteria, virus, holatra, ary koa ny parasit. Noho izany, raha mampihatra menaka tongolo mainty ao an-tampon-dohanao ianao, dia mety hisoroka ny mety ho fananganana ny voajanahary amin'ireny zavamaniry ireny. Vokatr'izany dia mihatsara ny fahaleovan'ny folonao sy ny volonao.
Ho fanampin'izany, ny tombony azo avy amin'ny tongolo gasy mainty ho an'ny volo dia an'ny ny vokatry ny tongolo lay. Ny fampiharana ny menaka volon'ny tongolo lay tongolo mainty amin'ny hodi-dohanao dia afaka mampihena ny fivontosana sy ny fahasosorana miaraka amin'ny hafainganana sy ny fihenan'ny volo amin'ny tranga sasany.
7. Ny fantsom-bazaha mainty dia manampy amin'ny fisorohana ny homamiadana
Araka ny fanadihadiana nataon'ny japoney natao tamin'ny 2007, ny fampiasana tongolo lay mainty dia afaka mampihena ny fivontosan'ny totozy. Miahiahy ny mpikaroka fa mety hitranga amin'ny olombelona koa izany. Ity toerana ity dia mifanaraka amin'ny fanadihadian'ny International Journal of Preventive Medicine. Ny famerenana dia manondro fa ny fihinanana tongolo lay efa antitra dia misy ifandraisany amin'ny fivoaran'ny homamiadana.
Ary koa, ny fanadihadiana vitro natao tamin'ny 2014 dia nanolo-kevitra fa ny fitrandrahana tongolo lay mainty namboarina dia mety hampihena ny homamiadan'ny nono fitomboan'ny sela ary mamono ny sela homamiadana mihitsy aza.
8. Ny fitroka tongolo mainty dia miantoka ny fahasalamana tsara amin'ny fo
Fahasalamana amin'ny fo ny fanatsarana dia isan'ireo tombontsoa nalaina avy tamin'ny tongolo mainty malaza. Tamin'ny maodely biby tamin'ny taona 2018, nampitaha ny tombontsoa azo avy amin'ny tongolo gasy mainty sy ny vokatry ny tongolo lay manta amin'ny fahasalaman'ny fo ho an'ny olona salama, dia hitan'ny mpikaroka fa ny karazana tongolo lay roa dia mandaitra amin'ny fihenan'ny fahasimban'ny fo.
Ankoatr'izay, noho ny fahaizany mifehy ny kolesterola, ny tongolo gasy mainty dia mety mampidina ihany koa ny aretim-po.
9. Ny fitrandrahana tongolo mainty dia manampy amin'ny fanatsarana ny fahasalamana amin'ny atidoha
Ankoatr'izany, ny tongolo mainty dia afaka mampivoatra ny fitadidianao, indrindra raha miady amin'ny kognitif ianao toa ny sy ny aretina an'i Parkinson, ny aretina Alzheimer, na ny dementia aza. Ny antioxidant izay misy ao anatiny dia mety hampihena ny fivontosana anaovana andraikitra na mifandray amin'ny fepetra. Vokatr'izany dia mihatsara ny fahasalaman'ny atidohanao, miaraka amin'ny fahaiza-mitadidy tsara kokoa.
Ny tongolo lay hafa dia mitrandraka tombontsoa ara-pahasalamana
Koa satria ny fitrandrahana tongolo mainty dia manatsara ny hery fiarovana, dia mety koa izy ireo:
Ny fisorohana sy ny fanamaivanana ny diabeta
Ny fisorohana ny homamiadana sy ny fanamaivanana
Jock fitsaboana itony
fitsaboana ny tongotra amin'ny atleta
fametahana aretin'ny taovam-pisefoana
fisorohana sy fanamaivanana ny homamiadana
fanamaivanana ny tratrany
ny fisorohana mangatsiaka sy ny fanamaivanana
fanafoanana ny ady
Ny fahasamihafana eo amin'ny mainty fotsy tongolo sy ny tongolo maintso
Noho ny fanehoan-kevitr'i Maillard fa ny tongolo gasy lalandava dia lasa tongolo mainty, tsy mahagaga raha tsy mitovy ny endriny roa tongolo ireto, tsy ny hendry ihany, fa ny fifangaroan'izy ireo sy ny tsirony simika.
Ny fiovan'ny tsiro dia tena mandray anjara amin'ny fampihenan'ny fructans (fructose sy glucose) ao anaty tongolozy mandritra ny fanodinana. Farany, ny tongolo aty aoriana dia mifarana amin'ny faran'ny fructan ambany kokoa noho ny tongolo tsy mbola niasa. Raha jerena fa ny frankans dia mpanamboatra tsiro fototra, ny fihenany, noho izany dia midika fa ny tongolo mainty dia ho saro-bidy kokoa noho ny vaovao.
Ny tsiron'ny sôkôla mainty dia tsy mafimafy ny an'ny tongolo gasy; ny taloha dia mamy tangy, siramamy ary balsamic. Amin'ny lafiny iray, ity farany ity dia matanjaka kokoa ary manafintohina. Izany dia satria ny tongolo mainty dia manana votoaty allicin ambany. Nandritra ny fizotran'ny fahanterana, ny allicin sasany amin'ny tongolo gasy vaovao dia miova ho zezika antioxidant toy ny diallyl sulfide, ajoene, diallyl disulfide, diallyl trisulfide ary koa ny dithiins.
Noho ny fiovan'ny fananana fizika, ny tongolo mainty dia manana bioactivity ambony kokoa, ohatra, ny fananana antioxidant, fa tsy tongolo gasy. Ny sômôm-bary dia misy ny tongolo mainty, toy S-allylcysteine ​​(SAC) dia mihatsara kokoa raha ampitahaina amin'ireo ao anaty tongolo vao.
Raha tsiahivina, ny fitrandrahana tongolo mainty dia avo kokoa noho ny oxidant, kaloria, fibre ary vy ary vy raha oharina amin'ny tongolo gasy. Etsy andaniny, ny tongolo gasy maitso dia manana vitamina C avo, karbra ary allicin kokoa noho ny endrika tongolo vita amboara.
Mba ho marimarina, ny sotrokely tongolo gasy roa dia misy kaloria 25, sodium 3 mg, karbôlio 5.6 g, proteinina 1 g, matavy 0.1 g, fibre 0.4 g, 5.2 mg mg vitamin C, 30 mg kalsioma ary 0.3 mg vy. Mifanohitra amin'izany kosa, ny habetsaky ny raza-bazaha mainty dia misy kaloria 40, karazan-tsolika 4g, proteinina 1g, tavy 2g, fibre sakafo mahavelona, ​​1mg sodium, ironika 160mg, 0.64mg vitamin C ary kalsioma 2.2 miligram.
Fatran'ny fangaro mainty fotsy
Na te haka basim-bary mainty bizina ianao, sotro fihinanana amam-bazaha mainty, na sôkôla mainty misy ginger bentong, dia zava-dehibe ny hanarahanao ny fatra natolony. Toy ny vokatra voajanahary ny katsaka mainty dia vokatra mety hiteraka voka-dratsy ratsy raha be loatra.
Fa ny vovony fangaro ekena mainty hanao ranom-boasary makirana mainty na ranom-boasary makirana fotsifotsy na manampy amin'ny sakafonao, ampiasao malefaka 1/3 tsp ny vovo-dronono indray mandeha isan'andro. Mihatra ihany koa io fatra io rehefa te hampiasa tongolo lay mainty misy sakamalao bentong ianao. Raha tsy izany dia afaka manaraka ny fangatahan'ny dokotera ianao.
Te hahafantatra hoe ohatrinona ny tongolo mainty hohanina isan'andro? Eny, tsy misy porofo ara-tsiansa mba hamaritana mazava hoe ohatrinona ny tongolo mainty hihinana isan'andro. Na izany aza, ny fandinihana samihafa sy ny famerenan'ny mpampiasa dia manolotra an'izany 5-10 faribolana (jirofo) isan'andro dia sehatra mahomby sy azo antoka.
Raha te haka baolina na takelaka mangalatra tongolo mainty ianao dia 200mg ny fatra tena atolotra indrindra. Ho an'ny trondro Black Garlic Extract Tonic Gold, ranom-boankazo mainty namboarina malaza, 70ml isan'andro ny fatra voatondro.
Mampidi-doza ve ny fitrandrahana tongolo mainty?
Ny katsiro mainty amin'ny ankapobeny dia tena azo antoka amin'ny fanjifana olombelona ary na ny fampiharana topical aza. Saingy, ho fanina am-bava, dia afaka miteraka tebiteby amin'ny gastrointestinal, saingy mitranga izany amin'ny toe-javatra tsy fahita firy. Noho izany, raha manana tantara momba ny vavony na digestive ianao, dia zava-dehibe ny manatona ny dokoteranao alohan'ny handraisana ny fanafody na fanampin-tsakafo mifandraika amin'izany hoy ny manam-pahaizana momba ny sakafo ao amin'ny GoldBee.
Tsy azo antoka ihany koa ny fatra am-bava be dia be ho an'ny ankizy, raha ny fampiharana an-tendrony dia mety hiteraka fahavoazana toy ny hoditry ny zaza iray. Ny fampiharana Topical ihany koa dia mety hiteraka aretin-koditra rehefa vita amin'ny vehivavy bevohoka.
Fangatahana fangaro mainty fotsy
1. Hatsaraina ny tsiro amin'ny sakafo
Tahaka ny tongolo gasy maitso, ny katsaka mainty dia ampiasaina ho an'ny tanjon'ny culinary izay ampiana amin'ny lovia misy menaka isan-karazany. izany manapoizina ny tsiron'ny sakafo.
Noho ny fananany antibacterial sy anti-inflammatory, ny fitrandrahana dia ampiasaina ho singa manan-danja amin'ny vokatra kosmetika isan-karazany. Ny vokatra kosmetika misy azy io dia mahomby amin'ny fisorohana mony na fanatsarana ny fahasalamana amin'ny volo, anisany tombony hafa.
3. Fanamafisana ny fahasalamana
Ny fanondrahana tongolo mainty dia manatsara ny hery fiarovana. Toy izany, ny fitrandrahana dia ampiasaina amin'ny famenon-tsakafo izay manampy ny olona hialana amin'ny aretina isan-karazany.
Famenon-trondro maintso mainty
Kojakoja fotsifotsy mainty tonga amin'ny endriny maro isan-karazany ao anatin'izany ny vovon-katsaka mainty ahitra, bolongola fotsifotsy mainty na ranom-boasary makirana mainty. Ny iray amin'ireo vatsy dia mandeha amin'ny anarana Black Garlic Extract Tonic Gold, izay ranom-boasary makirana mainty.
Ny fakana tongolo lay mainty dia vokatry ny tongolo lay manta misy masirasira. Azo alaina amin'ny endrika ny vovo-dronono fotsim-bazaha mainty, ny sôkôla mainty volombatoy na ny ranon-dronono fotsim-boasary mainty. Ny sasany amin'ireo soa azo avy amin'io tafo io dia fanatsarana ny hery fiarovana, ny fisorohana ny volo, ny hoditra vita amin'ny hoditra ary ny fanatsarana ny lanja sy ny fihenan'ny lanjany. Ny katsentsitra dia ampiasaina amin'ny faritra maro, ao anatin'izany ny artista culinary sy ny indostrian'ny kosmetika.
Banerjee S., Mukherjee PK, Maulik S. Garlic ho antioxidant: Ny tsara, ny ratsy ary ny ratsy fanahy. Phytother. Res. 2003, 17: 97-106.
Ha AW, Ying T., Kim WK Ny vokatry ny tongolo mainty (Allium satvium) sombina amin'ny metabolika lipid amin'ny voalavo dia manome sakafo matavy faran'izay matavy. Nutr. Res. Pract. 2015, 9: 30-36
Kang O.-J. Ny fanombanana ny melanoidins noforonina avy amin'ny tongolo mainty taorian'ny dingana vita amin'ny famoahana hafanana. Prev. Nutr. Sakafo ara-tsakafo. 2016, 21: 398
Kim DG, Kang MJ, Hong SS, Choi YH, Shin JH Antifandrifianana ny famokarana mavitrika dia miraikitra amin'ny tongolo mainty. Phytother. Res. 2017, 31: 53-61
Milner J. Encyclopedia momba ny sakafo ara-tsakafo. Marcel Dekker; New York, NY, USA: 2005. Tongolo gasy (Allium sativum) p. 229–240.
1.Inona no fitrandrahana tongolo gasy?
2.Black Garlic Exact mekanismin'ny hetsika
3. Production Black Garlic Extract
4.Ny tongolo gasy mainty maka tombony amin'ny fahasalamana
5.Ny fahasamihafana misy amin'ny tongolo mainty sy tongolo fotsy
6.Ny fahasamihafana misy amin'ny tongolo mainty sy tongolo fotsy
7.Black Garlic Extract Dosage
8. Mampidi-doza ve ny fakana tongolo gasy?
9. Application Black Garlic Extract
10.Black Black Garlic Supplement